Electric Gaadhi curyaanku, Electric Bike, Carbon Fiber Electric Gaadhi curyaanku - Motorow
Electric Gaadhi curyaanku
korontada mootooyinka View DHEERAAD AH
baaskiilada korontada View DHEERAAD AH
SKATEBOARDS View DHEERAAD AH
HOVERBOARDS View DHEERAAD AH
ELECTRIC MOTORCYCLES View DHEERAAD AH
accessories View DHEERAAD AH
Sida a nooca bulshkuleetiga mooto cusub korontada, UWITGO S5 qaatay fikradda ugu dambeeyay design of technology gacanta safar, kaas oo si weyn loo isticmaalaa in baabuurta, si dadka isticmaala ay baydalka karo dhulka iyo mooto u iman doonaa xaaladda a xawaaraha lagu qiimeeyo. Ka sokow, waxay ku qalabaysan ah app gacanta safar cusub, taas oo ka dhigaysa in ay ka maskax. Eeg dharbaaxo waayo muuqaalada dheeraad ah.
Ka dhuuqida Shoogga Waayo Raaxada
View All mootooyinka
UWITGO qod6 waa brand mooto korontada cusub oo bar-for sare isticmaala saaran dulqaadasho. design Tani dhafan oo leh awooda sare awooda batariga, taas oo loo hubiyo kartaa masaafada saaran gaari kartaa ilaa 70km. Iyada oo ku saleysan aragtida design ergonomic, fuudh design ee bacda kursiga candho-, taasoo sii daayo kara daal users 'iyo in la kordhiyo waayo aragnimo ah ee fuushan mooto. Eeg dharbaaxo waayo muuqaalada dheeraad ah.
Sida model la fududeeyay, UWITGO J5 fudud oo yar yar. daawaha Aluminum ama fiber carbon qalabka jidhkiinna dhammaan ha la doortay karo by macaamiisha. Miisaanka uu leeyahay mooto daawaha aluminium waa 7.5kg, iyo miisaanka jidhka ee fiber carbon yahay 6.3kg oo kaliya. Waa ay fududahay in isku laab, fududahay in la qaado, iyo ku haboon yahay safaro gaaban. Eeg dharbaaxo waayo muuqaalada dheeraad ah.
Aluminum Daawaha & Carbon Fiber
UWITGO CF1 ku ansixinayaa daawaha magnesium sida ay jir, taas oo ahayd nuurka iyo miisaamidda iyo xoog xoog, taas oo ka dhigaysa miisaanka guud ee baaskiil 30% ayuu ka hooseeyaa inta kale ee market.The baaskiil oo dhan oo aan alxanka, taas oo ka dhigaysa dusha more jilicsan. Anfaco motor ka aalladda khafiif brushless, ka yar 5% khasaaraha tamarta, keydinta tamarta dheeraad ah iyo in la yareeyo daal lagu jiro saaran gaadiid ah.
kursiga hagaajin karo
Motorow-Tech waxaa had iyo jeer bixinta si hal-abuurnimo, maaraynta tayada iyo adeegga macaamiisha dareenka weyn. Professional for mootooyinka korontada, e-Baaskiilada, rullebrett iyo hoverboards.
Saxiix to our warsidaha Life USN
© Copyright - 2019-2020 : All Rights Reserved. Products Guide - Products Featured - Tags Hot - Sitemap.xml - amp Mobile